लिवर्टी इनर्जीको आइपीओ भर्ने आज अन्तिम मौका
काठमाडौं : लिवर्टी इनर्जी कम्पनीको स्थानीय बासिन्दाका लागि खुला भएको आइपीओमा आवेदन दिने आज बुधबार साउन २१ गते अन्तिम दिन हो । कार्यालय समयभित्र यसमा आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । यस कम्पनीले साउन ७ गतेबाट स्थानीय बासिन्दाका लागि आइपीओ खुला गरेको थियो । कम्पनीले लमजुङ जिल्लाको उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि १५ लाख कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो । लिवर्टीले पहिलो चरणमा स्थानीयका लागि जारी पुँजीको १०% आइपीओे निष्कासन गरेको हो ।
यस कम्पनीले आयोजना अतिप्रभावित क्षेत्र लमजुङ जिल्लाको दोर्दी गाँउपालिकाको वडा नं. ६ र ७ (तत्कालीन फलेनी र डोढोडेनी गाविस) का स्थानीय बासिन्दाका लागि ५ लाख कित्ता (३३.३३% खुला गरेको छ । यसैगरी, आयोजना प्रभावित क्षेत्र दोर्दी गाँउपालिकाका बाँकी वडा र बेशीसहर नगरपालिकाको वडा नं. ११ का स्थानीयलाई छुट्याएको मध्ये ५ लाखकित्ता (३३.३३% सेयर पनि बिक्री खुला गरिएको छ ।
त्यसैगरी, लमजुङ जिल्लाका सम्पूर्ण बासिन्दाका लागि बाँकी ५ लाख कित्ता (३३.३३% सेयर बिक्री खुला भएको छ । यसमा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले आवेदन दिन सकिनेछ । न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन पाइनेछ । बिक्री प्रबन्धकको काम एनआइबीएल एस क्यापिटलले गरेको छ ।
यसले लमजुङ जिल्लाको फलेनी र दोदेनीगाउँपालिकामा, २५ मेगावटको अपर दोर्दी ‘ए’ हाइड्रोपावर निर्माण गरिरहेको छ । यसअघि कम्पनीले गत फागुन २७ गतेबाट उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि १५ लाख कित्ता सेयर आइपीओ बिक्री खुला गरेको थियो । तर, कोरोनाका कारण चैत ११ गतेबाट देशमा लक डाउन सुरु भएपछि बीचैमा बिक्री कार्य स्थगन गरिएको थियो । यसअघि आवेदन नदिएकाले अहिले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले शनिबारसम्म देशभर वर्षा हुने